Androany amin'ny tantara RayHaber
Androany tao amin'ny tantara 18 Ôktôbra 1898 Il.Wilhelm sy ny vadiny dia tonga tany Istambul niaraka tamin'ny Hohenzollern yacht. Nandeha nankany Anatolia ny mpivady tamin'ny volana Oktobra niaraka tamin'ny fiaramanidina manokana natolotr'i 21 Anatolian Railway Company. Nanao fahatsapana tsara momba ny lalamby alemà any Anatolia izy. [More ...]
Androany amin'ny tantara 17 Oktobra 1874 Tao amin'ny tafika Ottoman dia nohazavain'i Major Ahmed Rashid ny maha-zava-dehibe ny fiaran-dalamby hanitarana hatrany Damaskosy ka hatrany Meka ary avy any mankany Jeddah. Vaovao momba ny lalamby mitovitovy ary vaovao hafa mety ho liana amin'ny: anio amin'ny tantara: 17 Oktobra 1874 tao amin'ny tafika Ottoman [More ...]
Androany ao amin'ny tantara 16 Oktobra 1830 Ny tetik'asa momba ny fanamboarana ny lalamby voalohany ao amin'ny Fanjakana Ottoman dia efa voaomana. Vaovao momba ny lalamby mitovitovy ary vaovao hafa izay mety ho liana amin'ny anio: 16 Oktobra 1830 Ny fanamboarana lalamby voalohany ao amin'ny Fanjakana Ottoman 16 / 10 / 2012 16 Oktobra 1830 [More ...]
Tantara XUNUMX Oktobra 15 Ilıca-Palamutluk dia najanona ny fifamoivoizana. Ny 1939 dia natsangana tamin'ny volana 13 ary 1941 dia naverina tamin'ny Oktobra 29. Ny News Railway dia mety ho liana amin'ny: 1941 Oktobra 15 Ilıca-Palamutluk fifamoivoizana an-dalamby dia najanona. [More ...]
Androany amin'ny tantara 14 Oktobra 1941 Nifindra tany amin'ny Railway (State Rail Rail) ny gara eo anelanelan'i Uzunköprü sy Svilingrad. Vaovao momba ny lalamby mitovitovy ary vaovao hafa mety ho liana amin'ny daty anio ianao: 14 Oktobra 1941 fiantsonana eo anelanelan'i Uzunköprü sy Svilingrad State… 14 / 10 / 2012 14 Oktobra [More ...]
Androany ao amin'ny Tantara 13 Oktobra 1870 Edirne-Sarımbey dia neken'ny sitrapony. 13 1923 Oktobra lasa renivohitr'i Torkia vaovao Ankara State. Ny diplomata dia nijanona tao anaty fiara fitaterana amin'ny arabe jamba tao amin'ny fiantsonan'i Ankara mandra-pahitan'izy ireo toerana honenana ao Ankara. [More ...]
Tantara androany 12 Oktobra 1957 Banky Fandefasana Banky Ny sambo fiaran-dalamby voalohany naorina tao amin'ny Haliç Shipyard dia natomboka. Vaovao momba ny lalamby mitovitovy ary vaovao hafa izay mety ho liana amin'ny: 12 Oktobra Androany 1957 Shipping Bank nanorina ny Haliç Shipyard ho 12 / 10 / 2012 12 Oktobra [More ...]
Androany 11 Oktobra 1872 1 tapitrisa 980 tapitrisa 1 tapitrisa an'ny 230 tapitrisa XNUMX tapitrisa famatorana bonus an'ny lalamby Rumeli no namidy. Nanomboka ny fananganana ny tsipika Skopje-Mitrovica sy Tarnova-Yambol. Vaovao momba ny lalamby mitovitovy ary vaovao hafa mety ho liana amin'ny [More ...]
Androany ao amin'ny Tantara 10 Oktobra 1875 famatsiam-bola Ottoman dia nanambara fa ny sombin-javatra sy ny fametrahana ny trosany dia natsahatra ho an'ny taona 5. Ny 10 Oktobra 1924 Fanamboarana tsipika Ankara-Musaköy. 10 Oktobra 2016 Kartal-Pendik-Tavşantepe Metro no nanokatra ny Railway News mitovy ary [More ...]
Tantara androany 8 Oktobra 1892 Ny fifanekena amin'ny tsipika izay hiaraka amin'ny zotra Tesalonika-Mitrovica ao amin'ny toby Karasulu hanomboka ao Firecik ary mandalo ny Komotini sy ny tantara dia nomena an'i René Bauda-uy frantsay, banky iray ao Istanbul. Ny tsipika 1 Oktobra nanomboka ny 1893 1 aprily amin'ny 1896 [More ...]
Androany tao amin'ny Tantara 4 ny volana Oktôbra 1860 Constanta-Chernova (Boğazköy) dia nodidiana. Nanomboka ny lalana. (64,4 km.) 4 Oktobra 1872 Ny ampahany voalohany amin'ny lalamby Haydarpasa-Izmit, ny tsilala Haydarpasa-Tuzla, dia vita tao anatin'ny 14 volana ary nisokatra ho an'ny serivisy. 4 Oktobra 1888 [More ...]
Androany amin'ny Tantara: 2 Oktobra 1890 Ny governora ao amin'ny distrikan'i Şakir dia manankery görevli
Androany amin'ny tantara 2 Oktobra 1890 Ny governora Şakir dia nilaza fa ny lalamby tsara dia tokony hapetraka eo anelanelan'i Jeddah sy Arafat ao amin'ny Hijaz notsidihiny. HICAZ RAILWAY Hiaran-dalamby Hijaz, Ottoman sultan II. Nosoratan'i Abdülhamit [More ...]
Androany amin'ny tantara: 30 Septambra 1917 Ny tram any Konya mihoatra ny fiandohan'ny taonjato
Androany amin'ny tantara 30 septambra 1931 Samsun-Sivas tsipika (372 km) dia vita ary nosokafana hiasa. Mitentina 29.200.000 kilao ny tsipika. 30 Oktobra 1917 Ny tram tao Konya dia fantatra nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taonjato. Grand Vizier Avitony Ferit Pasha, izay governoran'i Konya ao 1917 [More ...]
Androany ao amin'ny Tantara: 29 September 1848 Pave dia Britanika
Androany amin'ny tantara 29 Septambra 1848 Ny anglisy iray antsoina hoe Pave dia namoaka tetik'asa goavambe izay nanomboka tany Calais ary nitatra tany India tamin'ny alàlan'i Istanbul sy Basra. Nandinika ny fanitarana ny zotra Pave ho any Beijing ihany koa izy. Vaovao momba ny Railway ary [More ...]
Androany amin'ny tantara: 28 September 1920 avy amin'ny Edremit Bay
28 ao amin'ny Tantara 1920 Septambra XNUMX Ny fanapahan-kevitry ny governemanta momba ny hatsaram-panahy sy ny tombontsoan'ny mpitantana ny Balya mine Yorgî Rally, izay hanomboka amin'ny Edremit Bay ary hiakatra hatrany Akçay-Havran amin'ny Palamutluk, dia nankatoavin'ny sultan. Vaovao sy fahalianana mitovy amin'ny Railway [More ...]